सच्चिएनन् ओली ! एकपछि अर्काे ‘एकलौटी निर्णय’ले नेकपामा विवादै–विवाद [समाचार टिप्पणी] -
उज्यालो प्रतिनिधि October 15, 2020 उज्यालो फोकस TOP STORIES
काठमाडौं । पटक–पटक ‘एकलौटी’ निर्णय गरेकै कारण विवादमा तानिइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेसँगै पार्टीभित्रबाटै घेराउमा परेका छन् । पछिल्ला केही महिनायता बढ्दै गएका पार्टीभित्रका असन्तुष्टिहरुलाई मत्थर बनाउने प्रयासमा लागिरहेका अर्का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड भने पुनः एकपटक ‘अपमानित’ महसुस गरिरहेका छन् । प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म पार्टीभित्र बढ्दै गएको आन्तरिक विवाद धेरैजसो प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्णयले भइरहेका छन् । बुधबार बिहानमात्रै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केहीबेर छलफल गरेर निस्किएका प्रचण्ड साँझ राष्ट्रपति कार्यालयबाट मन्त्रीहरुको नाम सार्वजनिक हुँदा अलमल्ल पर्दै निकटस्थलाई भनेका छन्, ‘यो पार्टी एकताको स्पिरिट बिना भएको एकताविरोधि काम हो ।’
अझ, विश्वमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीकाबीच भएका कतिपय विवादित निर्णय प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसम्म जोडिँदा पटक–पटक जनगुनासाहरु व्यक्त भइरहेका छन् । कोभिड नियन्त्रणमा ठ्याक्कै जुट्नपर्ने बेला भइसकेको थियो, चैत वैशाखतिर । विश्वका अन्य मुलुकमा बढ्दै गएको संक्रमण दरले नेपालमा पनि प्रभावकारी तयारी हुन जरुरि थियो ।
जनअपेक्षा, सोही अनुरुप थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८ वैशाखमा दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याए । अध्यादेश जारी भएपछि पार्टीभित्रबाटै चर्को आलोचना खेपेका प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद विस्तारमा समेत आलोचनाकै श्रृङ्खलामा उद्दत भएको घटनाक्रमले पुष्टि गदै गएको नेकपावृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ ।
हुन त प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा त्यही बेलामा माग नभएको होइन । पार्टीभित्रबाटै सार्वजनिक रुपमा आएका अभिव्यक्तिमात्र नभई पार्टी बैठकमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले समेत बाटो मार्गप्रशस्त गर्न सुझाएका थिए । तर, सत्ताको भोक जागेका ओली आफू निकट विवादित छवि भएका व्यक्तिहरुलाई राज्यको उच्चपदस्त जिम्मेवारीमा नियुक्ति दिलाउँदै असन्तुष्टिहरुको चाङ बटुल्दै गइरहेका छन् ।
जसको ज्वलन्त उदाहरण बुधबार भएको मन्त्रिपरिषद नियुक्ति र अर्का अध्यक्ष लगायत पार्टी पक्तिंबाटै आएको आवाजलाई लिन सकिन्छ भन्दा फरक नपर्ला । पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजगत्वमा गठित कार्यदलको सुझावका आधारमा अघि बढ्ने सहमती भएसँगै मत्थर भएको पार्टी विवादको श्रृङ्खला घट्नेभन्दा बढ्नेतर्फ गएको संकेत बुझिएको छ ।
पटक–पटक एउटै विवाद
प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै पार्टीभित्रबाटै विवाद भएको यो पहिलो पटक होइन् । यसअघि ओलीको एकलौटी शैलीको विरोध गर्दै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपालले आफू निकट पत्रकारहरुलाई बोलाएर ओलीको एकलौटी निर्णय गर्ने शैलीकै कारण आफूहरु एक्सनमा उत्रिनुपरेको बताएका थिए ।
पत्रकारहरुसँग प्रचण्डले पार्टी एकताको बेला भएको आलोपालो सरकार चलाउने सहमति र गत मंसिर ४ गते पाँचै वर्ष ओलीलाई सरकार चलाउन दिने सहमतिसम्मका प्रसंग कोट्याएर ओलीले ‘एकलौटी निर्णय’ गर्दै अगाडि बढेकाले आफूहरुले त्यसका विरुद्ध उभिएको प्रष्ट पारेका थिए ।
मात्रिका यादवले नयाँ पार्टी सदस्यता फारम बाँडेपछि नेकपामा भाँडभैलो !
५ वर्षे कार्यकाल त्यागेर आफू पार्टीकेन्द्रीत भएर लागेका प्रचण्डलाई ओलीले पटक पटक धोका दिएका छन् । उच्च पदस्त तथा महत्वपूर्ण नियुक्ति गर्ने बेलामा प्रायजसोः प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई समेत ‘सुईंको’ नदिने गरेकाले विवाद अझै चर्किएको छ ।
तर, आश्वासन दिएर पंगु बनाइरहने ओलीले छलफल गरेर अघि बढ्न भने अझै थालेका छैनन्
खतिवडाको विवाद नसकिँदै पौडेलको ईन्ट्रि
प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासपात्रमध्येका पनि नजिकका पात्र हुन्ः डा. युवराज खतिवडा र विष्णु पौडेल । नेकपाका महासचिव समेत रहेका विष्णु पौडेल वर्तमान सरकारको अर्थमन्त्री नियुक्ति भएका छन् भने डा. खतिवडा अमेरिकाको राजदूत नियुक्त भएका छन् ।
यी दुवै पात्रलाई ओलीको ‘बक्सिस’ मिल्यो भन्दा फरक नपर्ला । पूर्व गभर्नर समेत रहेका खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा मनोति गराएर साढे २ वर्ष मन्त्री बनाए ओलीले । राजतन्त्रकालदेखि नै सरकारी नियुक्तिमा छाइरहेका खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट बिदा हुने वित्तिकै पदविहिन भने भएनन् । दुई साताका लागि भएपनि उनलाई आर्थिक सल्लाहकारमा ओलीले हतार–हतार नियुक्ति दिलाए । केही दिन सल्लाहकारको भूमिकामै रमाइरहेका खतिवडालाई ओलीले अर्को सरप्राइज दिए । अमेरिकाको राजदूत ।
खतिवडालाई जस्तै ओलीको ‘बक्सिस’ पाइरहनेमध्येका अर्का पात्र पौडेल पनि हुन् । ललिता निवास प्रकरणमा चर्को विवाद खेपेका पौडेललाई त्यहाँबाट उन्मुक्ति दिलाउन हरसम्भव प्रयास भयो । सत्तारुढ नेकपाका महासचिव समेत रहेका पौडेल यसबीचमा पार्टीभित्र देखिएका विवाद समाधानको संयोजक समितिमा समेत प्रायः देखा परिरहे । सधैं ओलीको नजिकमा रहेर केन्द्रमै रमाउने बानी परेका पौडेलसँग पछिल्लो समय बुटवलवासीबाट पनि खुसी छैनन् । स्थायी राजधानी विवादले चर्को रुप लिइरहँदा सुरुमा बुटवल बनाउन कस्सिएर लागेका पौडेल अर्थमन्त्रीको ‘कुर्सी’ देख्नेबित्तिकै लोभिए ।
केहीदिन अघिमात्र दाङको देउखुरी क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी बनाउन गएको प्रस्ताव पारित भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका दुई निकट पात्रहरु पौडेल र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलबीचको टसल अन्ततः ओलीले नै ‘लड्डु’ बाँडेर मत्थर गरेको चर्चा चलिरहन्छन् ।
पौडेललाई ‘अर्थमन्त्री’ र पोखरेललाई ‘राजधानी’ को लड्डु बाँडेपछि मिलेजस्तो भएको विवादको चपेटामा ओली आफैं फस्दै गएका छन् ।
कोरोना खोप लगाउने मानिस बाँदर बन्न सक्छ ?